आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै मन्त्री : एक दर्जनसँग स्पष्टिकरण::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै मन्त्री : एक दर्जनसँग स्पष्टिकरण
कार्तिक २७ । निर्वाचन आयोगको दैनिकी बनेको छ, आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै न कुनै सरकारी पद धारण गरेका व्यक्ति वा निकायलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने । तर, जवाफी पत्रमाथि आयोगले ‘के कस्तो कारबाही गर्छ’ भन्ने सार्वजनिक नहुने भएकाले निर्वाचनको ‘कर्मकाण्डी व्यवहारप्रति’ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पनि बढिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादव नै स्विकार्छन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति आयोग निकै संवेदनशील छ,’ प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘आचारसंहिता उल्लंघन रोक्न नागरिक तहबाटै विरोध हुनुपर्छ ।’
दर्जन बढी मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण
सरकारी साधन–स्रोत दुरुपयोग गरेको, निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको, कर्मचारी सरुवा गरेको, मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै आयोगले दर्जन बढी मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर ‘कर्मकाण्ड’ मात्र पूरा गर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
बामदेबले फेरी पनि चुनाब हार्छन् : नेकपा नेता
प्रचण्डले थाले यस्तो तयारी, नेकपाको सचिवालयले यी मन्त्रीलाई हटाउन सक्छ !
सरकारको काम चित्तबुझ्दो नगरेको भन्दै ‘प्रचण्ड’ले अब गियर बदल्ने जनाए !
बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै देउवाले दिए सरकारलाई ‘नालायक’ को संज्ञा !!